Traditional Chinese Iyeza decoction yinkqubo compound mabasasazwe ulwelo. Yeyona yokuqala kwaye eyona ndlela zazisetyenziswa e China. Okwangoku, amayeza yaseTshayina nangoku ngokubanzi asetyenziswe eklinikhi.
Isizathu sokuba decoction amayeza Chinese iye yasetyenziswa amawaka eminyaka ngenxa yemini yokulungiselela bhetyebhetye le kuqulunqo, sivumelane iimfuno TCM syndrome iyantlukwano unyango, kunye nomphumela okukhawulezayo ngakumbi, kodwa inkoliso incasa ebabayo .
Ukuze ukulawula umgangatho ngamachiza umthombo nokuqinisekisa ukusebenza eliphezulu unyango. YiLing zoxubo uye wakha kakhulu lokutyala zizalele nakuzo izinyawo izinto TCM kwiindawo ezahlukeneyo of China, iphi na indawo ifanelekileyo ukuze ukukhula izinto iintlobo ezahlukeneyo. Zonke zomthetho zenziwe izinto aphezulu amayeza esemgangathweni.
TCM decoction ngandlela enkulu umhlaza nokunyanga, scleroderma, yoma dystrophy, rheumatism, isifo neuron iimoto, udinwe, isifo seswekile, nephropathy, kunye nezinye iintlobo zezifo ezingapheliyo kunye namatyala kakhulu.